We.com.mm - သိုင်းဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်သိုင်းကွက်များ
သိုင်းလောကကြီးထဲမယ် သိုင်းကွက်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ အနက် မှောက်ခုံရယ် .. ဂျွမ်းပြန်ရယ် .. ဟပ်ထိုးရယ် ဆိုတဲ့ သိုင်းကွက်တွေက ပညာသား ပါပါ ၊ အနုပညာ အဆန်ဆုံး နဲ့ စွမ်းအားအကြီးဆုံးလို့ ထင်တယ် ..။
ရန်သူကို မြင်လိုက်လို့ ရုတ်တရက် ဝပ်ချလိုက်တဲ့စစ်သည်တော်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမျိုး …၊ ပြီးမှ မျက်နှာ နဲ့ မြေကြီး မိတ်ဆက်တဲ့ မြေကြီးပါတုန် သိုင်းမှောက်ခုံ ..။
စွန်းဝူခုံး ဂျွမ်းထိုးသလို လှေကားပေါ်ကနေ ဦးစိုက်ကျွမ်းပြန် ကျလာပြီး မှ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်တဲ့ ကျွမ်းပြန်ဇောက်ထိုး ဇက်ပါကျိူး သိုင်းကွက် ..။
ခြေသလုံးဖြူဖြူလေး ကိုခွေးပြေးဟပ်သလို ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက် နဲ့ လေးဘက်ထောက်တာက ဟပ်ထိုးခြေလွတ် ရှဲစုံကျွတ် သိုင်းကွက် ..။
ကဲ …. အမျိုးတို့ရော ဘယ်လို သိုင်းကွက် တွေကျင့်ဖူးလဲ ..? ကျင့်မလဲ ..? မန့်ခဲ့ဘာအူး …။ :3
၂၀၁၄ ခုနှစ် အမ်တီဗွီ ဆုပေးပွဲတစ်ခု မှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတုံး ရုတ်တရက် သိုင်းကွက်တွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဂျင်မ် ကာရေး … သူ့အကွက်ကတော့ ဆန်းဒေ ..။ တစ်တီတူး မိုးမျှော်သိုင်းကွက် ဗျ ..။ အရမ်းကြမ်းတဲ့ အကွက်ပေါ့ …။
ဂျနီဖာ ရဲ့ အကွက် ကတော့ အခုန အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ သိုင်းကွက် တွေထဲက တစ်ကွက်ပေါ့ .. ဟပ်ထိုးခြေလွတ် ဆိုတဲ့ သိုင်းကွက် …။ သိုင်းကျင့်တာလွန်သွားတော့ဘက်သီးတစ်လုံးပါ ကျွမ်းချင်သွားဒေ..။ ဘလိုလဲ ပရိသတ်ရေ့ ..၊ သဘောပါကြလားကွဲ့ ..။
ကဲ .. ကဲ .. ကိုယ့်အသည်းတစ်ခြမ်းကတော့ မက္ကစီကို က ဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုထဲမယ် ကိတ်မုန့် တွေကြားထဲမှာ ရုတ်တရက် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ အကွက် ဗျား ..။ မြေလူးသိုင်းကွက် တဲ့ .. ။ ဟာ .. အဲ့ကောင် စွန်းမက်ရိုင်းဒေ လို့ မပြောကြပါနက် …။ မြေပေါ်မှာ လူး ပြီး ကျင့်ရတဲ့ အကွက်မို့ မြေလူးသိုင်းကွက် ခေါ်တာနော့ ..။
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပြေးခုန်ပစ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကွီးအူစိန်ဘော့ ပြခဲ့တဲ့ အကွက် ပါ ..။ သူကတော့ balance wheel လိုမျိုး ဟာလေး စီးပြီး ကျင့်မှ ပိုစွမ်းဒယ် ..။ နာမည်က ဂျားကစ်စားဖူးသလီး သိုင်းကွက် ….။ အဘား .. အဘား ပါအော်သွားမယ် ..။ အဟင်း ..။
Kanye West / Kim Kardarshian and Amy Schumer
ပြီးခဲ့တဲ့ 2015 ဇွန် ၇ ရက်တုံးက 100 Gala ပွဲမှာ အေမီက ကန်းနေးဝက်စ် နဲ့ ကာဒါရှန် တို့ကို နောက်ပြောင်ပြီး ကော်ဇောနီပေါ် မှာ ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ သိုင်းကွက် ..။ ကန်းနေး ရော ကာဒါရှန် ရော အဲမှာ သိုင်းလောကရဲ့ထိပ်ခေါင် လင်မယား နှစ်ယောက်ပေါင်းထားတဲ့ မေတ္တာမဲ့သိုင်းကွက် နဲ့ ပြန်ချထည့်လိုက်တယ် ..။ တော်ရုံ မေတ္တာမဲ့ရုံနဲ့ တော့ ဘယ်ရမလဲ ..။ စမြင်ပါ ကတ်နေမှ ဒီအကွက် ထုတ်လို့ရတာလို့ သိုင်းလောကဝိဇ္ဇာကြီး တွေပြောသံကြားတာပဲ။
ဆယ်လီမဖြစ်ခင် Back Dancer လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားအဆိုတော်များ
မြန်မာနိုင်ငံမှ Facebook ဟာသဆယ်လီကြီးများ